Taliyihii ciidanka guutada 5aad ee DFS Jen. Maxamed Faarax (Goordoon) oo la dilay
October 28, 2012 - Written by
Muqdisho:-Wararka ka imaanaya Gobolka jubada Hoose ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan ururka Al-shabaab ay jidgooyo u dhigeen kolonyo baabuur ah oo uu la socday taliyihii ciidanka guutada 5aad ee ciidanka DFS Jen. Maxamed Faarax Goordoon iska horimaad dhexmaray ilaaladii Taliyaha iyo ciidanka Al-shabaab ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay Jen.Maxamed faarax.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay jid u dhexeeya magaalada Marko iyo Afgooye lana yiraahdo Ceelwareegow , dagaalka oo ahaa mid kadis oo lagu sameeyey dhabo gal ciidanka DFS ayaa waxaa ka soo gaaray khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Taliyaha ciidanka guutada 5aad ee DFS Jen. Maxamed Faarax (Goordoon) iyo ciidanka la socday ayaa waxaa ay ka yimaadeen dhinac Magaalada Marka waxaan ay ku sii jeedeen degmada Afgooye xiliga uu dagaalku qabsaday.
Ma ah markii ugu horaysay oo ciidanka ururka Al-shabaab ay weerar dhab gal ah ay ku dilaan Taliye ama sarkaal ka tirsan ciidanka DFS waxaa ay horay weerar gaadmo ah ugu dileen Taliyihii ciidanka DFS ee Lafoole oo isaguna ku dhintay iska hormaad dhexmaray Ilaaladiisa iyo ciidan ka Al-shabaab.
Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinac ciidanka DFS ee laga dilay Sarkaalkaan iyo dhinac Al-shabaab oo iyagu sheegtay in ay ka danbeeyeen dilka Taliyihii ciidanka guutada 5aad ee DFS Jen. Maxamed Faarax (Goordoon).
233,086 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress